नेकपाका सांसद को कतातिर? प्रतिनिधिसभामा प्रचण्ड-नेपाल पक्षमा ८७, ओली पक्षमा ८३ (सूचीसहित) – Dainiki Online
March 3, 2021 March 3, 2021 adminLeaveaComment on नेकपाका सांसद को कतातिर? प्रतिनिधिसभामा प्रचण्ड-नेपाल पक्षमा ८७, ओली पक्षमा ८३ (सूचीसहित)
संसद अधिवेशन नजिकिँदै गर्दा नेकपाभित्र सांसदहरूको तानातान तीव्र भएको छ। अहिले प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभामा प्रधानमन्त्री केपी ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’- माधव नेपालपक्ष बीच सदस्य संख्याका हिसाबले कडा टक्कर छ।दुवै समूहबीच सांसद संख्याको फरक यति साँघुरिएको छ, वामदेव गौतम निर्णायक हुने स्थिति बन्न लागेको छ। उनले भने आफू एकताको पक्षधर भएको भन्दै कतै पनि नलागेको बताएका छन्। प्रतिनिधिसभामा नेकपाका एक सय ७४ जना सांसदमध्ये एक जनाको निधन भएको छ भने सभामुख अग्नि सापकोटा दलका सदस्य हुँदैनन्। त्यसैले अहिले एक सय ७२ सांसद कायम छन्। त्यसमध्ये प्रचण्ड-नेपाल समूहले आफूसँग ९० भन्दा बढी सांसद भएको दावी गरेको छ भने ओली समूहले ८८ सांसद आफूसँग रहेका दावी गरेको छ। अहिलेसम्म वामदेव गौतम, उनकी पत्नी तथा सांसद तुलसी थापा र लालबाबु पण्डित कुनै पनि समूहमा लागेका छैनन्। अरू लगभग एउटा समूहतिर खुलेका छन्।
सेतोपाटीले अहिलेसम्म खुलेका सांसदहरूको तथ्यांक केलाउँदा प्रचण्ड-नेपाल पक्षसँग ८७ र ओली समूहसँग ८३ सांसद छन् (यो समाचारको अन्तिममा सूची हेर्नुस्)। आफूहरूसँग धेरै सांसद रहे पनि प्रचण्ड-नेपाल समूह ढुक्क हुन सकेको छैन। ‘हामीसँग सांसद संख्या अलिकति भए पनि धेरै छ। तर अन्तिम समयमा केही संख्या यताउता हुने हो कि भन्ने डर पनि छ। किनकी ओलीसँग पैसा र शक्ति छ,’ प्रचण्ड-नेपाल समूहका एक सांसदले भने, ‘नेकपाको संसदीय लडाइँमा फेरि पनि वामदेव गौतम नै निर्णायक हुने स्थिति छ।’ वामदेव, तुलसी र लालबाबु तीन जना खुल्न बाँकी भए पनि उनीहरू कुनै एक समूहतिर लाग्दा अरू केही सांसद पनि प्रभावित हुन सक्ने प्रचण्ड-नेपाल समूहका सांसदले बताए।’उनीहरूसहित पाँच-सात जना सांसदको संख्या एकतिर थपघट हुन सक्छ,’ उनले भने।
नेकपा विभाजन गर्नु हुँदैन भनेर लागेका सांसद लालबाबु पण्डित अन्तिम समयमा आफूतिर आउनसक्ने प्रचण्ड-नेपाल पक्षको आशा छ। उनले भने मंगलबार सेतोपाटीसँग कुरा गर्दै आफू ओली, प्रचण्ड र नेपाल एक ठाउँमा उभिए भने मात्र त्यस्तो बैठकमा सहभागी हुने नत्र कतैतिर नलाग्ने बताए।केही गरी अन्तिम समयमा वामदेव, तुलसी र लालबाबु ओलीतिर लागे भने ओलीले बहुमत पुर्‍याउन सक्ने डर पनि प्रचण्ड-नेपाललाई छ।उनीहरू तीन जना ओलीतिर लागे भने प्रतिनिधिसभामा ओली पक्षसँग ८५ सांसद पुग्छन्। वामदेव राष्ट्रियसभा सदस्य हुन् भने तुलसी र लालबाबु प्रतिनिधिसभा सदस्य हुन्। त्यस्तो अवस्थामा प्रचण्ड-नेपालसँग प्रतिनिधिसभामा ओली समूहभन्दा दुई जना मात्रै सांसद धेरै हुन्छन्।
नेकपा संसदीय दलको विधानमा राष्ट्रियसभाका सांसदहरूले समेत संसदीय दलको नेता चयनमा मतदान गर्न पाउँछन्। उपाध्यक्ष वामदेव ओली समूहमा लागे भने राष्ट्रियसभामा ओलीकै बहुमत पुग्छ। राष्ट्रियसभामा नेकपाका ५० जना सांसद छन्। राष्ट्रियसभा अध्यक्षले मतदान गर्न नपाउने भएकाले ४९ जना कायम हुन्छ। ४९ जनामध्ये प्रचण्ड-नेपाल पक्षमा २४ सांसद छन् भने ओली समूहमा पनि २४ जनै छन्। यस्तो अवस्थामा गौतम जता लाग्छन्, राष्ट्रियसभामा उसकै बहुमत पुग्छ।ओली पक्षले फागुन २२ गते संसदीय दलको बैठक बोलाएको छ। त्यहाँ उसका पक्षमा बहुमत पुग्यो भने त्यो ओलीको ठूलो नैतिक जित हुनेछ।
सूची हेर्न यहाँ थिच्नूहोस Click Here